सेल रोटि आधा मात्रै खादा उहालाइ पनि खाना मन त लाग्दो होनि तर सन्तानको माया कहाँ भोकले रोक्न सक्दो रैछ र? – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
सेल रोटि आधा मात्रै खादा उहालाइ पनि खाना मन त लाग्दो होनि तर सन्तानको माया कहाँ भोकले रोक्न सक्दो रैछ र?
बैशाख ११, २०७७ ०७:३३ मा प्रकाशित
पोखरा, ११ बैशाख २०७७:
आजभन्दा करिब २२ वर्ष अघि। घाम आफ्नो बालपनसग रमाउदै थियो अरे । हावा पनि सधै झै आफ्नैपनमा रमाउदै थियो अरे तर घरिघरी अल्छि मान्दै त्यसैले आभास गर्न सकिन्थ्यो रे कि हावाले पनि कर्मकाण्ड मात्रै पूरा गरिरहेको छ।
विचारा! नलागोस पनि कसरी? पानीलाई आफ्नो अस्तित्व गुमाउन बाध्य बनाउने त्यो चिसोमा, घामको न्यानोसग आनन्दले बस्न कसलाई पो मन लाग्दैन र? तर त्यसो भन्दैमा हामिले जस्तो हावाले कहाँ आफ्नो जिम्मेवारी, अनुशासनको उलंघन गर्न सजिलै छुट पाइन्छ र? त्यसैले जसोतसो आफ्नै लयमा बहकिदै थियो अरे ।
माघको त्यो चिसो बिहानीमा उत्तर पश्चिमबाट गौरीशंकर र उत्तर पुर्वबाट सगरमाथाको चिसो हावा खादै सबैजना आआफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न लाग्दै थियो अ रे ।
कोहि बरफले छोपेको सिङ्दान स्योङ (सिङ्दान खोला) को पानी लिन जाँदै थियो अरे भने कोहि वस्तुभाउ तिर। तर हिजोसम्म घासपात गर्ने आमा आज बिहान सबै गैसक्दा पनि जान सक्नु भएन अरे । त्यसैले माम(बज्यै)ले पक्कै बिराम भको होला भनेर झाक्री बोलाउनु भाको रे किनकी गाउमा केही हुदा सबैभन्दा सजिलो विकल्प भनेकै झाक्री थियो अ रे यद्यपि अझै पनि केही हदसम्म छ नै।। संयोग नै मान्नुपर्छ कि झाक्री आएर यताउता गरेर केही समयपछि मैले सुर्यको बालपनसगै रमाउन धर्तीमा पहिलो पाइला टेकेको रे। मैले धर्तीमा पाइला टेकेपछी निकालेको आवाज सुनेपछी पिडाका बाबजुद आमाको ओठमा खुशीको मुस्कान छाएको थियो रे । हुन त कुन आमाको अनुहारमा मुस्कान आउदैन होला र नौ महिना गर्भमा बोकेर आफ्नो सन्तानको जन्म दिन पाउँदा।।
खुशी हुनको पछाडि धेरै कारणहरु थिए । झन्डै एघार वर्ष अगाडि दाइ जन्मिएको ३-४ वर्षपछि बाबाले भारतमा अर्कै विवाह गरेर बस्नु भएको थियो। जतिबेला आमाले अनेकौं बाधा अट्चन भोक्नु परेको थियो। ती सबै पिडालाइ शव्दमा उतार्ने हैसियत त मसग छैन तर ती दिनहरुको केही अनुभुती चै गर्न सक्छु । हिजोसम्म “मेरो एउटा छोरा छ अब यसले पाल्छ मलाई” भन्ने आमाको मुखबाट अब दुई भाइ छोरा भएका थिए त्यसैले आमालाइ पिडाभन्दा बढी खुशी महसुस भएको हुनुपर्छ । सयौ व्यक्तिको मुख बिस्तारै टालिदै थियो भने सयौ मान्छेको फुर्सदको कुराकानी गर्ने विषय परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । तसर्थ आमा खुसी हुनुभएको थियो । अरु आमालाइ जस्तै मेरो आमालाई पनि आज मैले दिन नसकेको जवाफ मेरो छोराहरुले दिन्छन भन्ने लागेको हुनुपर्छ त्यसैले हजारौं पिडामा पनि खुसी थिए ।
म झन खुसी किनकि मैले धर्तीमा पाइला टेक्न पाएको । जीवन र मरण दुवैको यात्रा सरुवात गरेको दिन। त्यसैले चिच्याइरहन्थे म घरिघरी । लाग्दो होकि चिच्याउवटले संसार जित्दै छु मैले ।
म जन्मिएको खुसी सगै धेरै चै दुखहरु थपिएका थिए आमाको । म घरिघरी चिच्याएर आमाको दिमाग ह्याङ मात्रै हैन लाग्दथ्यो कि सुल्टो दिमागलाइ उल्टो पनि नै बनाउथ्यो होला । यतिसम्म कि मलाइ राती पनि नचाएर बस्नुपर्ने । तर आफ्नो सन्तान हुर्काउन कुन आमालाइ झन्झट लाग्दो हो र? । लगभग एक महिनापछी आप्पा झुल्किनु भएको थियो अरे तर त्यसपछि आप्पाको मुख हेर्न मैले आखे (बाजे) बिराम हुनुपर्ने अवस्थासम्म कुर्नु पर्यो अर्थात ९ वर्ष ।
सबैको आप्पा भनेर बोलाउथे तर मैले ९ बर्षासम्मा आपा भन्नै पाएन । यसमा मेरो कुनै गुनासो छैन किनकी उहाको आफ्नै बाध्यता थियो /रहेछ । उतातिर चार जनाको परिवार धान्नु पर्ने । जाबो यता त बल्ल तीन जना त थिए ।
म जन्मिएको खुसी सगै आमालाइ दुखको भारी पनि यसरी बढ्दै थियो कि ती जसरी पनि गर्नैपर्ने । बिहान घासमा जादा नाम्लोडोरी सगै कोक्रोमा बोकेर पाखामा जाने र आउने बेला घासको भारी माथी ल्याउने । ती त सामान्य दिनचर्या थियो आमाको लागी ।
पछिबाट घरमै राख्नु हुन्थ्यो । आज पनि मलाइ याद छ कि घरमा बस्दा आइरक पार्ने ठाउको खरानी खेलेर आमा आइपुग्दा सेताम्य भएर बसेको दिन ।
कहिलेकाही अचेल भन्नू हुन्छ ” सधै भारि पुर्याउन एक घन्टा लाग्थ्यो रे तर मलाइ घरमा छोडेर गएको दिन ३५ मिनेटमा पुर्याउनु हुन्थ्यो रे , सधै आधा घण्टा लाग्ने बाटो बीस मिनेट लाग्थ्यो रे अनि घरको आगनमा आएर नानी भन्दा ह ….. भन्ने मेरो आवाज सुनेपछि अघिको थकाइ सबै हराउर्थ्यो रे” । सायद यो भन्दा अरु के नै हुनसक्छ र सन्तानप्रतिको माया ।
स्कुल जानुपर्छ भनेर वर्षायामको बेला बोराको ओढ्ने बनाएर स्कुल पठाउनु भएको दिन आज पनि मलाइ झलिझली याद छ। कहिलेकाही भन्नुहुन्थ्यो “म त अनपढ भए भए तिमिहरु त पढ ” । सायद पढाइप्रतिको आमाको त्यो सद्भाव नहुदो हो त आज म कहाँ हुन्थे होला कहिलेकाही सम्झिदा आँखा बिस्तारै कि तलाउ बन्छ कि त छहरे खोला जस्तो बग्न थाल्छ ।
कहि कतै कसैले केही मिठो खानेकुरा दिदा मेरो नानीले खान्छ भनेर पटुकिमा बाधेर ल्याइदिदाको खुसी सायद आज म सहरको सबैभन्दा महगो ठाउमा गएर खादा पनि लाग्दैन होला । आज सम्झिन्छु कि सेल रोटि आधा मात्रै खादा उहालाइ पनि खाना मन त लाग्दो होनि तर सन्तानको माया कहाँ भोकले रोक्न सक्दो रैछ र? । कसैले चकलेट दिदा आफू नखाएर, मैले खादा मेरो खुसिमा आनन्दित भएर मेरो क्रियाकलाप हेरेर अगाउने आमाको मायाले सायद मैले शब्दमा भन्नू खोज्नु अन्याय पक्कै हुन्छ नै। ।
दाइको एलएलसि पछिको घरमा साथी भनेकै म थिए । तर विस्तारै मैले पनि घर छोड्नुपर्ने दिन आइपुग्यो किनकी एसएलसि पछि घरमै बसेर पढ्ने सम्भावना कम थियो । तर पहिल्यैबाट पढ्न प्रोत्साहन दिने आमाले छोडेर जादा केही भन्नुभएन मात्रै राम्रोसँग पढ भन्ने शब्द मात्रै निस्केको थियो उहाको मुखबाट । तर म उहाको अनुहारमा आशाका दियोहरु देखिरहेका थिए कि अब छोराले पढेर केही गर्छ अनि मैले पनि सुख पाउछु भन्ने तर त्यति बेला मैले केही भन्ने सक्ने आट नै थिएन।
जब मैले घर छोड्दै थिए उहाको आखाबाट झरेको आसुको थोपाथोपामा आशाका दियो बलिरहेको थियो । मैले उहाको अनुहार नै हेर्न सकेको थिएन किनकी सत्र वर्षसम्म कहिकतै नहिडेको म आजबाट घर छोडेर हिड्दै थिए। घरबाट निस्केपछी मलाइ देखुन्जेल घरको बाहिर निस्केर हेरिरहनु भयो तर मैले हेर्न सकेको थिएन किनकी आमाको आखामा तलाउ बनेर बसेका र भन्न नसकेका भाव देखेपछी मलाइ पनि सम्हाल्न पक्कै गारो हुन्थ्यो ।
फोन गर्दै आए । त्यसपछि पनि रेगुलर फोन गर्थे अहिलेपनी गर्छु तर पहिलाको तुलना अलिक कम । कहिलेकाही हप्तामा, कहिले पन्ध्रमा, कहिले महिनामा गर्छु र वर्षमा एकचोटि भेट्न पुग्छु तर आजसम्म आसुको ढिक्कमा भएको आशाको दियो आजसम्म पनि मैले बालेर उहालाइ उज्यालो भने दिन सकेको छैन तर प्रयासरत छु।
हर दिन म त्यहि आमाको भनाइ सम्झिन्छु कि ” म त अनपढ भएभए तिमिहरु त पढ ” यहि भनाइ आज प्रेरणाको स्रोत बनेको छ मलाइ ।
म कक्षा चार देखि दशसम्म प्रथम भए तर २०६८ सालको जनगणनामा रामबाबु चौधरी सर जनसंख्या टिप्न आउदा केटो तगडा छ भनेको दिन र अरुबेला अरु कसैले तपाइको छोरा पढ्न टाठो छ भनेर भनेको दिन तपाइको अनुहारमा आएको खुसी अरुबेला मैले कहिल्यै देखिन । हुन् त मैले अहिलेसम्म त्यस्तो खुसि हुने काम पनि गरेकै छैन त्यसैले म अहिले त्यही खुशिको लागि प्रयासरत छु तर हजारौं भिडको यो महगो सहरमा आजसम्म त्यस्तो खुसी किन्न सकेको छैन । किनकी अहिलेसम्म किन्न सक्ने हैसियतमा पुगेकै छैन ।
म तपाइको अनुहारमा त्यो मुस्कान ल्याउन चाहन्छु, जुन मेरो पहिलो आवाजले तपाइको अनुहारमा ल्याएको थियो।।
आज मातातीर्थको दिन अर्थात आमाको मुख हेर्ने दिन सबै आमाहरुलाइ शुभकामना